Geofumadas sawirada kaliya - Geofumadas
Juquraafi ahaan sawiro ku dhow
Oktoobar, 2010 Leisure / waxyi, safarka
Inta badan in la sameeyo, dhab ahaantii wax badan. Halkan waxaan ka tagaa ugu fiican maalmaha ugu dambeeya ee sawirrada iga tagay dhadhan xiiso leh.
Caawa waa dayaxa
iyo berrito qorraxda
walbahaarka ayaad i weydiistay
Parachico ayaan ku siin doonaa
Iyada oo maaskeelka dhegta
My chinchin ayaa ku dhawaaqi doona
iyada oo midabkayga madow
Mermaid Little mermaid kuwaas oo
waxay ku jirtaa badaha badda
adeeca kan ugu sarreeya
kaalinta meesha allabariga
Waxaan ka socdaa Chiapas, Chiapaneca
laga bilaabo halkii dumarka oo dhan
Waxay yihiin geesinimo oo qurux badan
oo ammaan ku leh doonistooda.
Marka codka marimba,
Waxaan dardar gelinayaa garaacadayda,
ilaa ay dhulku gariiraan
iyada oo aan haysto zapateado.
conatus, magic, hullabaloo
Waxaan la soo toosay quruxdiisa
dadka reer Chiapacorceño
Xagga sare ee calaamadaha Chiapa de Corzo, oo leh farriin yar oo nalalka sanadka gudihiisa 2000.Cañón del Sumidero. Si aad u dareento wax aan caadi ahayn, iyada oo webiga laga koray duufaanka dhamaadka 2010.
Waxaa jiray hage ah oo u sheegay Chias Indians of the precipice si looga fogaado in loo xirxiray. Gidaarka xeegada ah ee xayawaanku waxay ka dhigi doonaan buulooyinkooda iyo xayawaanka ku yaala kuwa dhaadheer iyagoo cabsida ku dhacaya.
Dhererka 5450 msnm
Qiyaasta 25 Kilometer ee saldhiga
Masaafada ku jirta derbiyada korontada ilaa mitirka 840
Dhinaca midig, Yaxaasyadu waxay joogtaa qadada kadib oo hubaal ah in loo gudbiyo 3 galabtii.
Ma aha mid u dhigma, laakiin waa u qalantaa isbedelka saacadaha 27 ee safarka la soo maray, maalmo aad u yar.
Ku mahadnaqa Grillo iyo asxaabta; baasaska la Pame, jacarandas iyo waxyaabaha kale kuma haboona halkan ... laakiin waxay tiriyaan.
Waayo, jacaylka Ilaah, aynu ka baxno geesaha juquraafiga. Xitaa way adag tahay in la sharraxo waxyaabaha qaarkood.
Choluteca waxay soo saari doontaa farshaxanka ugu caansan
Ohhh! Calaamad u leh jerky iyo Pozol chiapaneco.
Botana ee wanaagsan. Iyada oo leh weedho derbiga. Kaliya laba degmo oo UTM ah ayaa looga baahday sharaxaad badan si ay u fahmaan. Mid ka mid ah ayaa yiri:
"Qofka joojiya jaqsiinta, waa Amampa nafta "
TIGO modem, oo roaming ku dhow meel kasta. Iyo Pita-ga madax banaan.
Waxaan arkaa sharaxaad aan loo baahnayn.
Post Previous«Previous Sida Mapserver shaqeeya
Post Next Waa maxay Bentley oo keeneysa in lagu dhiirrigeliyoNext »
3 Jawaab "Geofumadas sawirada kaliya"
Mauricio isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ku faraxsanahay, inaanu nahay digital waa shirkad aan bilaabayo, bilawga bisha jeenawari sanadkan kumbiyuutarrada dayactirka, daabacayaasha, iibiya domains, fulinta xogta, dayactirka maalin kasta ee dayactirka iyo dayactirka, khadka la raaco waa xakameyn toos ah ...
Hi Mauricio. Waxaan hayaa safar sugaya halkaas, si aan u arko bal markan booqdo San Cristobal iyo haddii Palenque uu waqti siiyo.
Waan kula soo socodsiin doonaa, si aad u ogaato haddii aad waxbadan uga sii sheegi karto waxqabadka “Waxaan ku jirnaa dijital”.
Salaan ka soo Chiapas, Waxaan arkaa inuu ogaa qayb ka mid ah quruxda quruxda badan iyo in ay qaadato xasuusta wacan, Waxaan rajeynayaa inaan mar kale booqanno Jannaayo ama Abriil in ay jiraan xaflado Chiapa de Corzo iyo San Cristobal siday u kala horreeyaan.